ဇိမ်ခံအဖြစ်လည်းသုံးနိုင်သလို အဆင့်မြင့် Sport မော်ဒယ်အနေနဲ့ပါ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်း ပြနိုင်တဲ့ မော်ဒယ် ၂ ခုကို ကျွန်တော်တို့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်ပါ။အရောင်းပြခန်းနဲ့ လက်လှန်းမီတဲ့ Land Rover . . .
Used အနေနဲ့အဝင်ရှိပြီး ကြိုက်သူများတဲ့ Porsche . . .
နာမည်ကျော် ဒီကား ၂ စီးရဲ့ Comparison ကို လေ့လာလိုက်ကြရအောင်ဗျာ . . .
– Luxury တန်းဝင်ဇိမ်ခံကားတစ်စီးကို Off-Road သုံးဖို့ဆိုတာ တော်တော်တော့တွေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Range Rover Sport အေးဆေးပါ။ Off-Road အတွက်လည်း စိတ်ကြိုက်မောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်သလို ခရီးဝေးသွားလာမှုတွေအတွက်လည်း အားမနာတမ်း စီးနင်းနိုင်မှာပါ။ အင်ဂျင်ပိုင်း၊ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု အထူးကောင်းမွန်သလို အမြန်နှုန်းမြှင့်တင်နိုင်မှုလည်း အားကောင်းတယ်၊။
– Macan ရဲ့ အကောင်းဆုံးအားသာချက်ကတော့ လက်ကိုင်ပိုင်း တည်ငြိမ်မှုပါပဲ။ ဒါ့အပြင် အမြန်နှုန်း မြှင့်တင်မောင်းနှင်ရမှု၊ သက်သောင့်သက်သာရှိမှုတွေကလည်း အကောင်းဆုံး အနေအထားမှာရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နည်းပညာတွေက အဆင့်မြင့်ပြီး၊ စနစ်တွေများတယ်ဆိုပေမယ့် သုံးရတာကောင်းမွန်သလို လွယ်ကူစေပါတယ်။
– တတိယထိုင်ခုံတန်းပါရှိပေမယ့် ယင်းထိုင်ခုံတွေက အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက်ဆို နည်းနည်း ကျပ်ချင်သလိုပါ။ Luxury တန်းဝင်မော်ဒယ်ကို စီးနင်းမယ့်သူတွေအတွက် ဆီစားနှုန်းဆိုတာ သိပ်မပြောပလောက်ပေမယ့် ဆီစားနှုန်းနည်းနည်းများတာကိုတော့ အားနည်းသလိုမြင်မိပါတယ်။
– ပြိုင်ဖက်မော်ဒယ်တွေထက် ဈေးနည်းနည်း ပိုချင်ပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းနဲ့ အပိုပစ္စည်း ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်မယ်ဆို ရှားချင်၊ ဈေးများချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ မော်ဒယ်ကို Sport ဆန်အောင် ဖန်တီးထားတာကြောင့် နောက်ဖက်ဝန်တင်ခန်း ကျဉ်းသွားပြီး ထိုင်ခုံနေရာပါ နည်းသွားစေတာ တွေ့ရပါတယ်။
– တပ်ဆင်ထားတဲ့ အင်ဂျင်က ၃.ဝ လီတာသုံး V6 အင်ဂျင်ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီအင်ဂျင်စနစ်က အင်ဂျင်သံလည်း တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အင်ဂျင်ရဲ့ လည်ပတ်အားက တစ်မိနစ်ကို အပတ်ရေ ၃၅ဝဝ မှာ ရုန်းအား ၃၃၂ပေ-ပေါင် ရှိပြီး ထွက်ရှိမယ့် စွမ်းအင် ပမာဏကလည်း မြင်းကောင်ရေ ၃၄ဝ အားထိအောင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ရဲ့ အမြန်ဆုံး လည်ပတ်မယ့် နှုန်းကတော့ တစ်မိနစ်ကို အပတ်ရေ ၆၅ဝဝ ထိ ရှိပါတယ်။
– ၃.ဝ လီတာသုံး V6 အင်ဂျင်စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားတာတွေ့ရပြီး အခြေခံလည်ပတ်အား တစ်မိနစ် အပတ်ရေ ၁၄၅ဝ မှာ ရုန်းအား ၃၃၉ပေါင်-ပေ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သလို စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကလည်း မြင်းကောင်ရေ ၃၄ဝ အားထိ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံး လည်ပတ်အားက တစ်မိနစ်အပတ်ရေ ၅၅ဝဝ ဖြစ်ပါတယ်။
– လေးဘီးယက်စနစ်၊ ၈ ချက်သုံး Auto Transmission တွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီမော်ဒယ်က အမြန်နှုန်း မြှင့်တင်မောင်းနှင်နိုင်မှုကောင်းမွန်တာတွေ့ရပါတယ်။ တစ်နာရီ မိုင် ၆ဝ နှုန်းကို အချိန် ၆.၉ စက္ကန့်နဲ့ အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်မှာပါ။ ပျမ်းမျှ ဆီစားနှုန်းကတော့ ဆီတစ်ဂါလံကို ၁၉ မိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ မြို့တွင်းလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ဆိုရင် ၁၇ မိုင်နဲ့ အဝေးပြေးလမ်းကြောင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ၂၃ မိုင်လောက်ထိအောင် စီးနင်းနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
– ဂီယာချက် ပြောင်းလဲမောင်းနှင်နိုင်မှုအပိုင်းမှာ Auto, Manual စနစ် ၂ မျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ ဂီယာချက်က ၇ ချက် သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်နှုန်း မြှင့်တင်နိုင်မှုအနေနဲ့ တစ်နာရီ မိုင် ၆ဝနှုန်းကို အချိန် ၅.၆ စက္ကန့်နဲ့ ရောက်အောင် မြှင့်တင်နိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမြှင့်ထားတဲ့ ၃.၆ လီတာသုံး မော်ဒယ်ခွဲလည်းရနိုင်ပြီး သူက မိုင် ၆ဝ နှုန်းကို အချိန် ၄.၄ စက္ကန့်နဲ့ မြှင့်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီတစ်ဂါလံကို ပျမ်းမျှ ၁၉ မိုင်မောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး မြို့တွင်း ၁၇ မိုင်နဲ့ အဝေးပြေးလမ်းကြောင်းမှာ ၂၃ မိုင်ဝန်းကျင် စီးနင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ် ၂ စီးလုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ညီမျှပါတယ်။ ဆီစားလည်း ဒီလောက် မကွာလှပါဘူး။ နည်းပညာ မြင့်မားမှုကိုကြည့်ရင်လည်း ၂ စီးလုံးက အမြင့်တန်းတွေပါ။
ကိုယ်ထည်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်တော့ Range Rover Sport က နည်းနည်းပိုကြီးတယ်။ ခရီးသည် လိုက်ပါနိုင်မှု ပိုတယ်။ ဈေးကွက်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Macan က Brand New ရဖို့ Service ရဖို့ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ နည်းနည်းတော့ အလှမ်းကွာနေပါတယ်။ အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ ဇိမ်ခံကားမျိုးကို ကိုယ်ထည်ကြီးကြီးလိုချင်သူမျိုးဆိုရင် Range Rover Sport က ကိုက်ညီမှုရှိစေမှာဖြစ်ပြီး ဇိမ်ခံကားကိုမှ Sport ဆန်ဆန်လိုချင်သူအတွက်ဆိုရင်တော့ Macan က ရွေးချယ်သင့်တဲ့ကားမျိုး ဖြစ်ပါကြောင်း . . .
Consignment ကား စာရင်းများ အကောက်ခွန် နဲ့ ကညန ပေးပို့ပြီးမှ နယ်မှတ်ပုံ တင် လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်